उपसभापतिको मतगणना हुँदै, महामन्त्रीको गणना भोलिमात्रै, यस्तो छ तालिका – prabhab.com उपसभापतिको मतगणना हुँदै, महामन्त्रीको गणना भोलिमात्रै, यस्तो छ तालिका – prabhab.com
Posted on December 15, 2021 December 15, 2021 / 1 महिना अगाडी / 109 Viewed
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत गत सोमबार भएको निर्वाचनको उपसभापतिको मतगणना साँझ ५ बजेदेखि हुँदैछ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले साँझ ५ बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए । यसअघि ४ बजेदेखि मतगणना थाल्ने भनिएको भए पनि तयारी गर्दा ढिलाइ हुने भएको हो ।
आज बिहान पार्टी सभापतिको मतगणना सकिएको थियो । आज उपसभापतिको मतगणना हुनेछ । उपसभापतिमा डा. चन्द्र भण्डारी, सुजाता कोइराला, धनराज गुरुङ्ग, पूर्णबहादुर खड्का र विजयकुमार गच्छदारबीच भिडन्त भइरहेको छ । यीमध्ये दुई जना निर्वाचित हुनेछन् ।
उपसभापतिको मत पार्टी मुख्यालय वीपीनगरका तीन ठाउँमा गणना हुँदैछ । सचिव रिजालले महामन्त्रीको गणना भोलिमात्र हुने बताए । त्यसपछि सहमहामन्त्रीको गणना भएपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको गणना हुनेछ ।
यसअघि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत बढी मत नल्याएपछि मङ्गलबार पुनः मतदान भएको थियो । दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवा विजयी भएका हुन् ।
निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणामअनुसार सभापतिमा विजयी देउवाले दुई हजार ७३३ मत प्राप्त गरेका थिए । सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर कोइरालाले एक हजार ८५५ मत प्राप्त गरे ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कूल चार हजार ६२३ मत खसेको थियो । जसमध्ये ३५ मत बदर भएको थियो ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा चार हजार ७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका थिए । एक सय ३२ पदका लागि ४८७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । मङ्सिर २४ गते भृकुटीमण्डपमा भव्य समारोहका बीच कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो ।
मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा एक स्थान र भृकुटीमण्डपमा दुई स्थानमा मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।